उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले निहुँ खोजे पार्टी फुटाउने मुडमा ! Canada Nepal
उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले निहुँ खोजे पार्टी फुटाउने मुडमा !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी भित्र अहिले रडाको मच्चिएको छ । जसपाको समर्थन लिएर मात्र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ । तर, जसपा भित्र अहिले सरकारलाई समर्थन नगर्न ठूलो खेल सुरु भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिक धारणा भने अहिले सम्म आएको छैन । तर, जसपा भित्र एउटा ठूलो खेमा सरकारमा जान तयार भएका छन् । जसपाले राखेको मागहरु सरकारले सम्बबोधन गरेमा सरकारलाई समर्थन दिने कुरा आए सँगै जसपाका केहि नेताहरु भने कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकारलाई समर्थन नदिने जोड दिईरहेका छन् ।
जसपाका शिर्ष नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो जसरी पनि केपी ओलीकै सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने जोड दिईरहेका छन् । नेता महन्थ र महतोले उपेन्द्र यादवलाई समेत सुरुवातीमा मनाएका थिए । तर, डा. बाबुराम भट्टराईको दबाबमा उपेन्द्र यादव अहिले कुनै हालतमा पनि ओली सरकारलाई समर्थन नदिने मुडमा पुगेका छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने जसरी हुन्छ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने तयारीमा जुटेका छन् । तर, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो कुनै पनि हालतमा प्रचण्डसँग मिलेर सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेका छन् ।
अहिले यहि विवादले जसपा भित्र रडाको मचिएको छ । जसपाका एक नेताले भने, "जसपा फुट्ने मोडमा पुगेको छ । उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई अहिले कुनै हालतमा पनि केपी ओलीलाई समर्थन नगर्ने जोड दिनुभएको छ । केपी ओलीको सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेपनि समर्थन दिनुहुन्न भन्ने तर्क आईरहेको छ । तर, महन्थ ठाकूर र राजेन्द्र महतो भने सरकार बदल्नु भन्दा हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्ने मुख्य एजेण्डा भएको बताउनु भएको छ । यदि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले निहुँ खोजे पार्टी फुटाउने फुटाएर भएपनि हाम्रो माग पूरा गर्ने मुडमा पुगिसक्नु भएको छ ।"
यो हप्ता जसपाको लागि निर्णायक हुने बुझिएको छ । जसपामा अहिले चिनियाँ राजदुतको पनि हस्तक्षेप बढेको छ । उपेन्द्र यादवमार्फत अहिले चीनले समेत केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन नगर्न जोड दिईरहेको छ । जसपा भित्रको अहिलेको रडाकोले ठूलै भुकम्प ल्याउन सक्ने आंकलन जसपा भित्र कै नेताहरुले गर्न थालिसकेका छन् ।
चैत्र ४, २०७७ बुधवार १२:१९:५३ बजे : प्रकाशित